I-China Lanthanum Fluoride LaF3 Ukukhiqiza neFektri | I-Liche
ILanthanum Fluoride (LaF3), Purity≥99.9% CAS No .: 13709-38-1 Isisindo Semolekyuli: 195.90 Iphuzu lokuncibilika: 1493 ° C Incazelo ILanthanum Fluoride (LaF3), noma i-lanthanum trifluoride, iyinhlanganisela encibilika kakhulu, ne-ionic. Inezinhlelo zokusebenza ezimbalwa njengokusebenzisa ku-fiber optics, ama-electrode, amalambu we-fluorescent kanye nokusetshenziswa kwemisebe. ILanthanum Fluoride, isetshenziswa kakhulu engilazini ekhethekile, ukwelashwa kwamanzi kanye ne-catalyst, futhi njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko zokwenza iLanthanum Metal. ILanthanum Fluoride (LaF3) ...
I-Lanthanum Fluoride (LaF3), Ukuhlanzeka≥99.9%
Inombolo ye-CAS: 13709-38-1
Isisindo Yamamolekhula: 195.90
Iphuzu lokuncibilika: 1493 ° C
ILanthanum Fluoride (LaF3), noma i-lanthanum trifluoride, iyinhlanganisela encibilika kakhulu, ne-ionic. Inezinhlelo zokusebenza ezimbalwa njengokusebenzisa ku-fiber optics, ama-electrode, amalambu we-fluorescent kanye nokusetshenziswa kwemisebe.
ILanthanum Fluoride, isetshenziswa kakhulu engilazini ekhethekile, ukwelashwa kwamanzi kanye ne-catalyst, futhi njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko zokwenza iLanthanum Metal. ILanthanum Fluoride (LaF3) yingxenye ebalulekile yengilazi yeFluoride esindayo ebizwa ngeZBLAN. Le ngilazi ine-transmittance ephezulu ebangeni le-infrared ngakho-ke isetshenziselwa izinhlelo zokuxhumana ze-fiber-optical. ILanthanum Fluoride isetshenziselwa ukugqoka amalambu e-phosphor. Ihlanganiswe ne-Europium Fluoride, ibuye isetshenziswe kulwelwesi lwe-crystal lwama-electrode akhetha i-Fluoride ion.
ILanthanum Fluoride (LaF3) ivame ukusetshenziswa ku:
- ukulungiswa kobuchwepheshe besimanje bokubonisa isithombe nobuchwepheshe kanye nezidingo zescintillator sesayensi yenuzi
- izinto ezingavamile zomhlaba ze-crystal laser
- Ingilazi ye-fluoride fiber fiber optic nengilazi yomhlaba engavamile ye-infrared.Usetshenziselwa ukwenziwa kwe-arc light carbon electrode emthonjeni wokukhanyisa
- ukuhlaziywa kwamakhemikhali asetshenziswe ekwakheni i-fluorine ion electrode ekhethiwe
- imboni ye-metallurgical esetshenziselwa ukwenziwa kwe-alloy ekhethekile ne-electrolytic ekhiqiza insimbi ye-lanthanum
Esedlule: IHolmium Fluoride HoF3
Olandelayo: Neodymium Fluoride NdF3